KALLUUNKA "WINTER WINTER": BEERITAANKA IYO DARYEELKA, SHARAXAADDA, SAWIR - KU'SAABSAN
Kiimikada "Winter Winter": dabeecadaha, beerashada agrotechnics
Ilaa hadda, noocyo badan oo isdabajoogta jiilaalka leh sifooyin tayo kala duwan ayaa la sameeyey. Mid ka mid ah waa noocyada kala duwan ee "Winter Winter", kaas oo ku kori kara cimilada qabow. Si kastaba ha ahaatee, si aad u hesho goosashada qani ku ah, waa inaad raacdaa xeerar dhowr ah oo ah beerashada iyo daryeelka geedaha xilliyeed.
Noocyada kala duwan ee loo yaqaan "Winter Winter" waxaa loo sameeyaa gobollada halkaas oo xaaladaha cimiladu ay u koraan geedo waaweyn oo waaweyn. Waxaa laga heley kalluumeysatada reer Kuuriya iyada oo soo mareysa laba nooc: "Forest Beauty" iyo "Winter Bere".
Ma taqaanaa? About pear waxaa loo yaqaan 1000 sano BC. In Europe, pear bilaabay inuu si ballaaran u fidiyo qarnigii XIX, waxaana loo keenay Kiev ka Byzantium.
Marka la tilmaamayo noocyo kala duwan oo loo yaqaan "Kyrgyz Winter" waxaan dhihi karnaa in faaiidada ugu wayni ay tahay koritaanka meelaha ay ka jiraan xaaladaha cimilada xun iyo isla mar ahaantaana siiyaan waxsoosaar sarreysa.
Noocyada dhirta "Winter Winter" waxaa lagu gartaa sifooyinka soo socda:
dhexdhexaad ah oo leh pyramidal, aan lahayn dhagax adag, xilliga dayrta waxay caleemo qulqulaysaa;
Waxaa lagu tallaalay qudaarta rootstock dhexdhexaad ah waxayna leedahay nidaam xidideysan oo u wareegaya dhulka;
caleemaha waa qaabka lafdhabarta, wax yar ka dibna calaamad u ah, dhamaadka midabkuna waa cagaar leh sheen dhalaalaya, gudaha gudaha waa cagaar cagaaran;
iyadoo ku xiran xaaladaha cimilada ee beerto, ubaxu wuxuu dhacaa Abriil ama Maajo. Ubax waa caddaan, aad udun, ilaa 3 sentimitir dhexroor, kuwaas oo lagu uruuriyo burushyada 3 ilaa 9 gogo ';
ka hor intaan miraha kowaad soo muuqan, laamuhu waa in lagu duubaa ilaa 60 ° oo go'an ilaa ay iyagu qaataan booska saxda ah;
noocyada kala duwan ayaa is-bacrin ah, laakiin waxaa loo baahan yahay in si wanaagsan loo marsado oo aad u baahatid inaad dhirto dhowr geedood oo dhow;
ma barafoobo marka uu barafku xooga ku filan yahay;
miraha xaaladaha wanaagsan ilaa 30 sano, miraha waxaa la dhigaa kolchatkah;
geedaha aan saameynayn qolof, gubasho kulul iyo kansarka bakteeriyada;
wuxuu u koraa ugu wanaagsan ee dhul-daaqsimeedka.
miro waaweyn, oo miisaankeedu yahay ilaa 250 garaam;
qaab dhismeedka qotoda dheer;
maqaarku waa cagaar iftiin, wakhtiga baaluq buuxda, midabku wuxuu isbeddelaa hodan hodan ah oo leh caleemo gaduud oo dhan oo ka baxsan miro;
qashirku waa mid casri ah oo jilicsan oo jaale ah, cufan, dhuxul leh dhadhan iyo dhadhan fiican;
isteroberi ayaa u bislaaday bisha Oktoobar;
miro ayaa loo dulqaadan karaa gaadiidka waxaana lagu kaydin karaa qaboojiyaha illaa bartamaha guga.
Waa muhiim! Si aad u hesho miraha tayo sare leh, noocyada jiirka jiilaalka waa in ay u bislaadaan 90 maalmood heerkul aan ka badnayn 10 ° C.
Geedo kala duwan ayaa si fiican loogu iibsaday guryaha xanaanada ama dukaamada khaaska ah. Xaaladdan, waxaad u baahan tahay inaad dareenka bixiso:
muuqaalka - nadiifi oo aan lahayn calaamadaha lafaha. U hubso inaad ku lifaaqto calaamad muujinaysa nooca iyo sharaxaadda aagga sii kordhaya;
Nidaamka xididka - Geedku waa inuu lahaado ilaa 5 xidid oo waaweyn iyo saddex xidid oo dheeri ah oo dhererkiisu yahay ugu yaraan 0.3 mitir. Waxay u muuqdaan kuwo dhalaalaya, iyada oo aan lahayn qudhaano iyo koritaano kala duwan.
Ugu fiican ee beerto waa geedo biennial ah.
Doorashada meesha saxda ah
Maadaama murgeyaashu ay ka mid yihiin noocyada hore u kaca, waxay u fiicantahay in la isticmaalo si loo abuuro beerta beerta ee "si degdeg ah". Shuruudaha meesha uu jebin doono waa:
goobta ayaa si fiican u iftiimisay qorraxda - inkasta oo pear ay koraan karo hooska qayb ahaan, laakiin ma dhali doonaan miro halkaas;
dhirta si fiican ugu raran buuraha iyo dooxooyinka, oo leh dhulka hoose oo qoto dheer, sida xididdada geedku ay gaari karaan qoto dheer oo ah 8 mitir;
lakabka sare ee bacaadka ee carrada, oo leh dhoobo qaro weyn. Pear wuxuu ku koraa si liidata carrada culus iyo carrada;
goobta waa in laga ilaaliyaa dabaylaha;
Haddii ay suurtagal tahay, dooro goobta si aad uga soo degto goobta galbeed ama koonfur galbeed.
Ka hor inta beerta pears, waxaa lagama maarmaan ah in la fuliyo shaqada diyaarinta, taas oo ka dibna ka caawin doona geedo si dhakhso ah u qaadan xidid meel cusub. Waxay ka kooban yihiin dhowr marxaladood:
for dayrta beerto dayrta waxaa loo diyaariyaa bisha, iyo gu'gii - tan iyo dayrta. Cabbirkiisu wuxuu ku xiran yahay da'da seedling - sanadlaha waxay u baahan yihiin qoto dheer ilaa 0.5 mitir, laba-sano jir ilaa 0.7 mitir. Dhexdhexaad ka mid ah godadka waa inay ahaataa mid raaxo leh meesha ay ku taallo xididada;
Qaybta qoryaha alwaaxda ayaa lagu riixaa bartamaha, oo kor u qaadaysa dhulka kor ku xusan ugu yaraan 0.5 mitir. Wuxuu noqon doonaa taakulaynta sapling mustaqbalka;
Bacriminta waxaa la riixay hoose - amooniyam amooniyam oo sare u kaca ilaa laba kiilo garaam (haddii bacrimin ay ku jiraan granules, waxaad u baahan tahay inaad qaadato hal kiilo). Waxaan xusuustaa maadada organic - wax ka badan 10 kiilo garaam. Haddii ceelku u diyaargaroobo ciidda bacaadka ah, waa inaad samaysaa baaldi nus ah oo ah peat;
60% ee sare waa ciidda bacrin ah, sidaas darteed xididada kuma xirna Bacriminta.
Nidaamka diyaarinta ah wuu dhammaaday oo waxaad ku beeri kartaa walxaha beeraha diyaarsan.
Waa muhiim! Bacriminta waa in aan la isticmaalin wax ka badan caadiga ah, maadaama xad dhaaf ah ay sababi karto gubasho gubasho leh oo geedo ku dhiman doono.
Tilmaamaha talaabooyinka tallaabo tallaabo lagu beeri karo geedo
Waxay u fiicantahay inaad sameyso nidaamkan wadajir ah - mid ka mid ah wuxuu dhajinta dhirtu si qumman u socotaa, kan kalena wuxuu sameeyaa dhammaan hawlaha. Nidaamka beeritaanka isteroberi waa sida soo socota:
At sapling ah xididdada asaasiga ah ayaa la jarjarayaa basaska fiiqan oo gooyay dhowr daqiiqo ee xal dhoobo dareeraha for impregnation wanaagsan;
Bartamaha godadka, tuulo yar ayaa la sameeyaa, kaas oo ah geedo loo diyaariyey in lagu rakibo, lagama maarmaanka u ah waqooyiga taageerada la isku haysto;
Xididdada waxaa si siman loo qaybiyaa godadka iyada oo aan leexin iyo jajabyo, oo hoos loo dhigay;
Si taxaddar leh u daadi jireen layers carrada diyaarisay, waxoogaa tamping ah. Isla mar ahaantaana mid kasta oo lagu daro seedling waa la ruxruxay, ilaalinta booska tooska ah. Tani waxay kuu ogolaaneysaa inaad ka saarto hulalka hawada ee soo-baxa. Goobta tallaalka waa inay ahaataa 4 sentimitir dhulka kor ku xusan;
Si fiican u buuxi ceelka biyaha si ay u dhamaystiraan ciidda. Marka geedkani hoos u dego, iyo xididka qoorta ayaa hoos ugu dhacaya heerka ciidda. Tani waa mabda'a beeritaanka haboon;
Gooyo waxaa lagu sameeyaa dherer ahaan ilaa 0.8 mitir si ay u sameeyaan taajka kelyaha oo si fiican u bislaaday. Haddii ay jiraan caleemo dhererkeedu yahay illaa 50 sentimitir, waa gabi ahaanba laga saaraa;
Geedka waxaa lagu xiraa taageero, iyo jirridda geedka waa in la mulched si loo ilaaliyo qoyaanka.
Waa muhiim! Haddii xididada si khaldan loo go'aamiyo ka hor intaan la beeriin, geedku wuu dhaawici doonaa wakhti dheer wuxuuna qaadanayaa xidid meel cusub. Geedo hal sano ah, xididdada ugu weyn waa la jarjarey 2 millimitir, biennial ilaa 4 millimitir dhumucdiis. Farsamadani waxay u oggolaaneysaa in xididada si dhakhso ah u nuugaan biyaha iyo nafaqooyinka.
Qofkasta oo koraya guga Cimilada jiilaalka geedaha jiilaalka ee laga yaabo inuu rabo inuu soo saaro goosashada qani ku ah. Shaqada xilligaas ah waa inay ahaataa:
ee daryeelka carrada;
in waqti gaabis ah bacriminta leh Bacriminta;
in qaabeynta taajka geedaha;
iyaga oo u diyaarinaya jiilaalka.
Tan iyo berrito waa kala duwanaanta qaboobaha, qadar ballaadhan oo biyo ah looma baahna, laakiin abaarta faa'iido ma leh. Waraabinta geedaha yar yar waa lagama maarmaan 8-10 maalmood oo kasta, ku shub ilaa 15 litir oo biyo ah oo ka hooseysa xididka. Wixii geedaha qaangaarka ah, habkan waxaa la sameeyaa hal mar laba toddobaad kasta iyada oo lagu darayo ilaa 30 litir oo biyo ah. Marka midhaha ay bilaabaan in ay u bislaadaan, waraabinta joojisaa ka hor goosashada.
Shaqooyinkan waxaa lagu fuliyaa fiidkii, iyo maalinta ku xigta, sidaas darteed ciidda ku hareereysan geedaha ma jabo, waa in la furo. Hababka noocan oo kale ah ma aha oo kaliya furitaanka helitaanka ogsijiinta si nidaamka xididka, laakiin sidoo kale kuu ogolaato inaad ka saarto cawska ka soo baxa dogob geedka.
Waxaad baraneysaa beerista pear cultures: Otradnenskaya, Lada, Fairy Tale, Veles, Rogneda, Nika, Talgar Beauty, Dyushes, Petrovskaya, Severyanka, Avgustovskaya dhar, Kokin, Bryansk Beauty, Thumbelina, Hera, Klapp's Favorite, Marble, Tabaruce.
Si looga hortago qoyaan ka soo baxa si dhakhso ah dhulka, mulching carrada waxaa loo isticmaalaa in lagu xiro. Sida mulch, waxaad isticmaali kartaa wax kasta, sida peat ama balka, dhejinta lakabka ilaa 10 sentimitir.
Wixii koritaanka wanaagsan iyo geedo fruiting khasab u baahan tahay bacriminta. Haddii caleen bilaabay inay huruud isu beddesho, miro ayaa bilaabay inuu dhaco, iyo pear joojiyay sii kordhaya - waxa kaliya oo ka maqan nitrogen. Maadada miro ayaa si liidata loo abuuray, ka dibna, siday u kala horreeyaan, ma jiro isteroberi - geedku waa mid ku filan fosfooraska. Kobaca xayawaanka sanadlaha ah - potassium ayaa mas'uul ka ah tan.
Waa muhiim! Dhirta yaryar waxaa lagu beeray kaliya Bacriminta nitrogen, oo kaliya lagu beeray geedo muddo laba sano ah uma baahna wax quudin dheeraad ah.
Bacriminta waxay u baahan yihiin inay:
Xilliga gu'ga hore, hareeraha qaawan waa in lagu daaweeyaa xalalka HOL. Haddii sababo aan la sameyn, waxaa lagama maarmaan ah in la dalbado Bacriminta nitrogen si ciidda. Waxaad isticmaali kartaa xal HOL (10 litir oo biyo ah, 600 garaam oo walax), cusbada (30 garaam halkii mitir laba jibbaaran) ama xal digaag (1:20);
ka dib markii ubax ah May maaddada organic waxaa loo soo bandhigay ciidda si qoto dheer ah 10 sentimitir. Waxaad bedeli kartaa xalka nitroammofoski ee saamiga 1: 200 - 30 litir oo geed hoostiis ah. Quudinta noocaas ah waxay kor u qaadi doontaa xilliga sii kordhaya iyo horumarinta tayada miraha mustaqbalka.
dhammaadka Juun, daaweynta foliar la leh bacriminta leh nitrogen-ka kooban tahay lagama maarmaan;
Bishii Luulyo, daaweyn kale oo noocaas ah, iyo 15 cisho ka dib geedaha fruiting, wax lagu daro fosfooraska-potassium ayaa lagu aasay dhulka ku xeeran;
ilaa qaybta labaad ee bisha Sebtembar, waxaad ku buufin kartaa xalka HOL (sida guga oo ku yaal geed qura). Xilliga dayrta, Bacriminta macdanta oo kaliya ayaa laga codsadaa ciidda. Tusaale ahaan xalku waa miis ka mid ah chloride potassium iyo laba qaado oo ah superphosphate baaldi biyo ah. Dhirta yaryar waxaa lagu kariyaa qoryo qoryo qoyan oo qashin ah oo qiyaas ahaan ah 130 garaam halkii mitir labajibbaaran.
Xilliga gu'ga, bacriminta cudurrada iyo cayayaanka ayaa la isku daraa quudinta ugu horeysa, taas oo lagu fuliyay geed qaawan. Haddii kelyuhu ay bararaan, carbamide ayaa gubi kara, wayna dhimanayaan - waxaa wanaagsan in la isticmaalo cilmiga nafaqada ee diyaar u ah sida Fitoverma, Akarina iyo kuwo kale. Si loo kordhiyo caabbinta geedka dabiiciga ah, natiijada wanaagsan waxaa lagu helaa dareeraha "Zircon" ama "Ecoberin".
Xilliga dayrta, dhirtu waxay u baahan yihiin in laga ilaaliyo dirxiga ee kuwa lamid ah, oo ka qarinaya qabowga dillaacsan ee jilifka iyo gacmeedka dhulka. Dhirta iyo dhulka ku xeeran dogobka waxaa lagu buufin karaa xal "Nitrofen" ama hal boqolkiiba oo Bordeaux isku dar ah. Xilliga guga iyo dayrta, qiyaasta dhoobada ah ee geedka dogobka leh mashiinka lime waa qasab.
Si aad u soo ururiso taajkii qaabka Ahraamta waxaa loo tixgeliyaa sida ugu fudud. Foomkan waa in la sameeyaa, laga bilaabo sanadka labaad ee nolosha geedka. Nidaamyadani waxaa loo fuliyaa sida soo socota:
ka dib markii laga beerto geedo ay go'aamiyaan laamaha qalfoofka, inta hartay waxaa laga saaray. Kacbada ugu weyn waa la jarjarey afar meelood hal meel oo dhererka iyo nadiifinta geeddi-socodka ka hooseeya heerka koowaad ee laamaha;
sanadka labaad ee guga, jirridda waxaa la jarayaa 20 sentimitir, laamoodba waa la jarjaraa oo aan ka badnayn 5 sentimitir waxaana la dhejin karaa xarig, sidaas daraadeed xagasha curyaamku waa 60 °. Waa inay jirtaa laba caleemood oo midho leh oo laamaha ugu muhiimsan;
guga oo dhan, manjooyin nadiif ah ee laamiyada waa la fuliyaa, ka saara laanaha tartanka ku koraya si toos ah gudaha taajka, isugeyn iyo jaban. Kobaca sannadkii hore ayaa la gooyaa 1/3 dhererka;
xilliga dayrta, waxay sidoo kale jarjaraan, laamaxyada iyo lafdhabarta. Qeybaha waaweyn waxaa isla markiiba lagu daaweeyaa garoonka beerta.
Waa muhiim! Marka qoritaanka geedaha pear u baahan yahay in la isticmaalo jaranjarada, sababtoo ah laamaha dhirta aad u jilicsan oo si deg deg ah u jebin.
Tan iyo noocyada kala duwan ee pear waa baraf u adkaysta, geedaha uma baahna hoyga jiilaalka, laakiin jilifka geedaha waa cuntada for jiirka iyo silica. Sidaa daraadeed, si loo ilaaliyo, waa lagama maarmaan in la xiro godka dhererka illaa 1 mitir oo leh cordon cufan ama maro, horay loogu qooyay cabeebka jiirka. Geedo yaryar waa in ay ku qasbaan inay soo gooyaan laamaha dabka oo si taxadar leh u duubaan ceyrinta, waxay noqon doontaa difaac lagu kalsoonaan karo ma ahan oo kaliya bahalka, laakiin sidoo kale dhaxan. Dhulka dhulku ku wareegsan yahay jirkiisa waa in la daadiyo ama la diiriyaa lakabka 15 sentimitir. Ka dib marka barafku hoos u dhaco, waxaad u baahan tahay inaad ku dhajiso hareeraha gabbaadka si aad u sameyso baraf duufaan.
Ma taqaanaa? Guryaha bogsashada ee isteroberi waxaa loo yaqaan 5,000 oo sano ka hor waxaana hadda loo isticmaalaa daawada dhaqanka si loo yareeyo heerkulka, iyada oo calool xanuun, sida durayo.
Ogolaansho leh sida "Winter Winter", waxaad si ammaan ah u beeri kartaa noocyada kala duwan ee boggaaga. Geedaha ma keenaan dhibaato badan xilliyada xannaanada. Haddii aad bacriminta ku sameysid waqti, biyo, qaadashada daaweynta ka hortag ah cayayaanka, dalagga ballaaran ayaa la hubiyaa. Maadaama ay isteroberi yihiin si wanaagsan loo ilaaliyo, waxaad yeelan doontaa miro cusub miiska ilaa bartamihii guga.